Help me ! laptop firmware — MYSTERY ZILLION
Help me ! laptop firmware
November 2008 edited November 2008 in Help Desk
ကျနော် laptop compaq presio CQ45 က firmware version 1.2 ကို update 1.4 လုပ်လိုက်တယ် ပြီးတော့ vista မရလို့ ဆို ပြီး firmware version 1.2 ပြန် run လိုက်တယ် ပြီးသွားတော့ ဘာမှပေါ်မလာတော့ ဘူး
ကူပါအုန်းဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ကျနော် မသိတော့ ဘူး
ကျနော်ကို ဥုံ ............... ဖွ နည်းလေးပေးပါအုန်းကျေးဇူးပြုပြီးတော့
ကျနော် သုံးရတာလဲမကြာတေးဘူး ထပ်လဲမ၀ယ်နိုင်လို့ပါ
please help me :77::77::77::77:
Danger Sai wrote: »
အတို window ကနကို vista လား ။ xp ကနေ vista ပြောင် ဖို update လုပ်ရင်းနဲ.ဖြစ်တွား တာ လား။ အနော် မ ရှင်းလို
နစ်ခုလုံးတင်မှာ ကျ windows သုံးခု တင်မလို့ လုပ်ရင်းလုပ်ရင်းနဲ့ .......
vista xp linux
ကျနော် အာက vista နဲ့ ဆို ok ပါတယ် တာပေမယ့် ကျန်တဲ့ ၀င်းတိုးတွေတင် ချင်တော့ အလွယ်နည်းလိုချင်လို့ AHCL mode ကို IDE mode ပြောင်းချင်လို့ firmware update လုပ်ရင် ရမလားလို့ စမ်းကြည့်တာ တာပေမဲ့ မထူးပါဘူး
firmware လဲ update ပြီးရော vista ပြန်တင်တော့ error ဘဲ တက်နေလို့ firmware အသစ်က vista နဲ့ သိပ် အဆင်မပြေလို့ version နိမ့် တဲ့ ဟာကို ပြန်ထဲ့လိုက်တာ တစ်ခါထဲ စက်က ကောင်းသွားရော ဘာမှကို ပေါ်မလာတော့ တာ ဟီး ခုဆို power ဖွင့်ထားရင် screen မှာ ပါမှမပေါ်တော့ ဘူး စက်တော့ run နေတယ်
အနော်ကို အဖြေမပေးရင် mz ကိုမချစ်တော့၀ူးနော် :p:p
firmware downgrade လုပ်လိုက်လိုလား။ firmware ကိုတေတေချာချာ Install မလုပ်လို.လား။ firmware ကအတို. computer နဲ.မကိုက် လို.လား။ အတ.ို computer က ဘာမမ ပေါ်တော့ ခက်ပြီ ။ သိတဲ့တိုတို ကြီးတွေ ပြောပြပါ အုံး ။အနော် လဲသိ ချင် ပါတယ် :77:
ကျနော် က တောင်းထားတာ model နဲ့ နံပတ်နဲ့ အသိကျ တောင်းထားတယ် နောက်ပြီးmodelကိုတောင်းထားပါတယ် မမှားပါဘူး
admin တွေ ဒီ thread လေးဖတ်မိရင် ပိတ်လိုက်တာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် delete ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် လုပ်ပေးလိုက်ပါ ကျေးဇူး ကျနော် အသစ်ဘဲပြန် ၀ယ်လိုက်ပြီ